Iswiidhan oo aan qaxooti baddan qaadaneeyn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhan oo qaxooti baddan qaadaneeynin
Iswiidhan oo aan qaxooti baddan qaadaneeyn
La daabacay fredag 6 november 2009 kl 11.11
Dalkaan Iswiidhan waxuu ka mid ahaa dalalka ugu qaxooti qaadashadda badan marka la barbar dhigo dalalka dariska la ah. Arrinkaas ayaa hadda dhanka kale u leexday, dalalka Noorweey iyo Finland ayaa hadda tiro badan oo qaxooti doon ahi u qaxeen.
Wasiirka arrimaha socdaalka ee dalkaan Sweden Tobias Billström, oo ka jawaabayey isbadalkaan ayaa sheegay iney inta badan dhacdo isbadalo ku wajahan qoddobbada la xirriira socdaalka iyo soogalootiga kuwaas oo aan aheeyn kuwo meel qura taagan.
Sharci siinta qaxootiga inta badan waxaan ku jirnaa dalalka ugu deeqsisan, Balse midda aan diiradda saarayo waxaa weeye in la helo siyaasad middeeysa dhammaan arimaha socdaalka iyo soogalootiga ee dalalka midowga Yurub, ayna ka gaaraan go'aamo isku mid ah cidkasta oo qaxooti doon ah, sidaas waxaa yiri Hans Ten Feld oo ah madaxa UNHCR ee Skandinavien-ka.
Bartammihii sanadii la soo dhaaftey ee 2008 waxeey Iswiidhan qaadatey 12 000, sanadan 2009 bartamihiisana waxeey qaadatey Iswiidhan 10 000 oo kaliya. Taasina waxeey ku tuseeysaa in qaxootigu u qulqulayaan dalalka dariska ah oo ay ka filanayaan soo dhaweeyn ka fiican tan dalkaan Iswiidhan.